Uganda oo sii deysay Soomaali xirneyd - BBC News Somali
Uganda oo sii deysay Soomaali xirneyd
20 Sebtembar 2010
Image caption Maxamed Aadan Diiriye waxa uu ka mid ahaa 16 Soomaali ah loo xiray qaraxyadii Kampala
Xukumadda Uganda ayaa waxa ay siideysay dad Soomaali ah oo gaaraya 16 qof dadkaas oo markii hore loo qabtay tuhun la xiriira qaraxyaddii bishii July ka dhacay caasimadda Uganda ee Kampalla.
Dadkan oo qarkood xirnaa muddo la bilood ah ayaa waxa la qabtay ka dib markii ay Kampala ka dhaceen laba qarax oo ay ku dhinteen dadka kor dhaafayey 70 qof, xilli habeenimo ah iyagoo daawanaya cayaartii kama dabeysta aheyd ee tartaka kubada cagta ee lagu qabtay Koonfur Africa..
Siideynta dadka Somalida ah waxa BBC u Xaqiijiyey Guddoomiyaha Jaaliyada Somalida ee Uganda Xuseen Abuukar Xasan.
Hadaba Dadka la sii daayey waxa ka mid ah Maxamed Aadan Diiriye oo ah Ardey wax ka dhigta jaamacad ku taala Magaalada Kampala.
Waxa uu sheegay in laga qabtay xarunta jaamacadda bishii July, wax dacwad ahna aan lagu soo oogin labadii bilood oo uu xirnaa
Weriyaha BBC Maxamuud Cali oo khadka telefoonka ku waraystay, Mohamed Adan Diiriye, isagoo jooga Kampala ayaa waxa uu uga waramay sidii loo qabtay iyo wixii uu la kulmay 2 bilood ee uu xabsiga ku jiray.
Sarakiisha ammaanka ee Waddanka Uganda ayaa howgalo ay ku baadi goobayeen ciddii ka dambeysay qaraxyadda ku qabqabtay in ka badan 50 qof oo ka soo kala jeeda wadamo ka mid yihiin somalia, Pakistan iyo Uganda..
Xarakada Shabaab ayaa sheegatay inay qaaday weerarkaasi.